Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.2 Kubvunza maererano nekucherechedza
Tiri nguva dzose kuenda vanofanira kubvunza vanhu mibvunzo.
Tichifunga kuti kuwedzera kwehutano hwedu kunotorwa muhurukuro huru yezvinyorwa, zvakadai sehurumende uye bhizinesi rekuita dhepfenyuro, vamwe vanhu vangafunga kuti kubvunza mibvunzo chinhu chekare. Asi, hazvisi izvo zviri nyore. Pane zvikonzero zviviri zvinoita kuti ndifunge kuti vatsvakurudzi vacharamba vachibvunza vanhu mibvunzo. Kutanga, sezvandakakurukura muchitsauko 2, kune matambudziko chaiwo nekururama, kukwana, nekuwanika kwezvinyorwa zvakawanda zvemashoko makuru. Chechipiri, kunze kwezvikonzero izvi zvinobatsira, pane chikonzero chikuru: pane zvimwe zvakaoma kudzidza pane zvakasiyana-siyana data-kunyange zvakakwana zvekuita. Semuenzaniso, zvimwe zvezvinonyanya kukosha zvekugarisana kwevanhu uye kufungidzira zviri mukati , zvido, ruzivo, zvinotarisirwa, uye maonero. Mamiriro ezvinhu epakati aripo mukati memisoro yevanhu, uye dzimwe nguva nzira yakanakisisa yekudzidza pamusoro penyaya dzemukati ndeyokubvunza.
Izvo zvinokonzera uye zvisingakwanisi zvinyorwa zvemashoko makuru ekutsvaga, uye kuti vanogona kukundwa sei nekuongororwa, zvinoratidzwa naMoira Burke naRobert Kraut's (2014) tsvakurudzo pamusoro pekuti simba rehukama hwakakanganiswa sei nekubatana paIndaneti. Panguva iyoyo, Burke akanga achishanda pa Facebook kuitira kuti ave nekuwana zvakakwana kune imwe yezvinyorwa zvakanyanya uye zvakanyatsorondedzerwa zvehupenyu hwevanhu hwakambosikwa. Asi, kunyange zvakadaro, Burke naKraut vaifanira kushandisa tsvakurudzo kuitira kuti vapindure mubvunzo wavo wekutsvakurudza. Chigumisiro chavo chekufarira-kunzwa kwekuzviisa pasi kwehukama pakati pomubvunzurudza neshamwari yake-ihumo hwemukati hunongowanikwa mukati memusoro wemubvunzi. Uyezve, kunze kwekushandisa tsvakurudzo kuti iwane migumisiro yezvinodiwa, Burke naKraut vaifanirawo kushandisa tsvakurudzo kuti vazive nezvezvinhu zvinogona kuvhiringidza zvinhu. Kunyanya, vaida kuparadzanisa kukanganisa kukurukurirana pane Facebook kubva kunekutaurirana kuburikidza nedzimwe nzira (semuenzaniso, email, foni, uye chiso nechiso). Kunyange zvazvo kushamwaridzana kuburikidza nemamerica uye foni zviri nyore kutonyorwa, izvi zvinotevera hazvina kuwanikwa kuBurke naKraut kuitira kuti vaifanira kuaunganidza pamwe nekuongorora. Kubatanidza dheta ravo rekuongorora pamusoro pesimba rehukama uye kusati ku-Facebook kuwirirana nepa Facebook log data, Burke naKraut vakagumisa kuti kukurukurirana kuburikidza ne Facebook kwakaita kuti kuwedzere kuwedzera manzwiro ehukama.
Sezvo basa raBurke naKraut richiratidza, makuru makuru ehupenyu haazobvisi kukosha kwekubvunza vanhu mibvunzo. Kutaura zvazviri, ndinogona kutora chidzidzo chinopesana kubva pane ichi chidzidzo: makuru makuru ezvinyorwa anogona chaizvo kuwedzera kukosha kwekubvunza mibvunzo, sezvandichazviratidza muchitsauko ichi. Nokudaro, nzira yakanakisisa yekufunga pamusoro pehukama pakati pekukumbira nokucherechedza ndeyokuti ivo vanopedzisa pane kugadzirisa; ivo vakaita sepanotti boroti uye jelly. Apo paine pane peanut butter, vanhu vanoda jelly yakawanda; apo paine hurukuro yakawanda, ndinofunga kuti vanhu vachatsvaga kuongorora.